Imboni Yemikhiqizo Yezokwelapha, Abahlinzeki - Abakhi Bemikhiqizo Yezokwelapha baseChina
Ukucatshangelwa Kokubumba Umjovo Wepulasitiki Wedivayisi Yezokwelapha: Ithuluzi Lezingxenye Zezokwelapha kuyinqubo ebucayi lapho izigxobo zokwehluleka ziphezulu kakhulu. Ngakho-ke, izinto eziningi okufanele zicatshangelwe ngesikhathi sokuklama, ukuhlela kanye nezinqubo zokukhiqiza. Lokhu kufaka phakathi: Imithetho ye-FDA…
Isikhunta Sepulasitiki Sensimbi Yezokwelapha
I-JS MOLD Mold igxile kakhulu esikhunjeni sepulasitiki esiphezulu sethuluzi lezokwelapha, izimboni zokupakisha kanye nezisetshenziswa zobuchwepheshe.Siphinde sisebenzele izimboni zezimoto, ezijwayelekile zezimboni kanye nemikhiqizo yabathengi.
I-Plastic Mold Factory Yomkhiqizo Othengiswa Kakhulu
I-JS MOLD Mold.imboni eyisipesheli ekwenzeni isikhunta nokubumba ipulasitiki, yatholakala e-China ngo-2011. kule minyaka edlule, besihlinzeka ngezibunjwa ezihlukahlukene kanye nezingxenye ezibunjwe ngomjovo kumakhasimende ethu ngekhwalithi ephezulu nangesikhathi esifushane.Ubuchwepheshe bethu obuyingqayizivele. kuyinkimbinkimbi futhi enobuchwepheshe obuphezulu…
Isikhunta Sedivayisi Yezokwelapha Yepulasitiki
I-Medical Injection Molding JS MOLD Mold inezindawo zokubumba zepulasitiki ezisezingeni eliphezulu ezitholakalayo zemisebenzi yakho yokubumba izingxenye zezokwelapha. Siyazi ukuthi ikhwalithi ibaluleke kakhulu futhi sikuthatha njengento ebalulekile lokho kuzinikela. Singumholi oshibhile wesikhunta sezempilo esisezingeni eliphezulu…
I-JS MOLD Mold ingumenzi wesikhunta wepulasitiki ochwepheshile otholakala eningizimu yeChina, sigxile ekwenzeni zonke isikhunta somjovo esibandakanya indiza, izingxenye zemishini yezokwelapha, i-electronics yabathengi, isicelo sasehhovisi, isicelo sasendlini, imboni, Impahla njll. amakhasimende...
Izingxenye zePlastiki zangaphambili nangemuva
Igama Lomkhiqizo: I-Plastic Front And Back Parts Design
Impilo yesikhunta:100,000-300,000shots Mold
Ikhava Yepulasitiki Yemikhiqizo Yezokwelapha I-JS MOLD Mold ingumkhiqizi wangokwezifiso wesikhunta esenziwe ngamapulasitiki. Itholakala ngamandla amakhulu okubamba amathani ayi-1300. Amapulasitiki ahlukahlukene ahlanganisa i-PTFE, i-PEEK, i-polymer, i-PVDF, i-PVC, i-CPVC, i-PPS, i-ETFE, i-polypropylene ne-PFA. Izimboni ezihlinzekwayo zifaka i-aerospace, amakhemikhali nokudla…
Umphakeli Wezingxenye Zepulasitiki Yezokwelapha
Isikhunta siyimboni ye-ISO9001:2015 enesitifiketi esiqinisekisiwe egxile ekuthuthukiseni, ekuklameni nasekukhiqizeni isikhunta somjovo wepulasitiki nezingxenye ezibunjiwe zezingxenye zepulasitiki Zezokwelapha zemishini yokuhlola, amazinyo, izinsiza zezokwelapha kanye nemikhiqizo yaselabhorethri. Amakhono: a. I-Mold Design yezokwelapha...
I-JS MOLD Mold inikeza isikhunta sepulasitiki esijovwe, okuhlanganisa izinhlobo zemishini yezokwelapha nenempilo izingxenye zepulasitiki, ukuqapha izindlu zepulasitiki, isikhunta sezingxenye zensimbi kadokotela wamazinyo njll. Noma nini lapho uza kithi, sihlala sisheshisa inqubo ukuze siqinisekise ukuthi uyanqoba isikhathi nezingcindezi zamanani futhi uhlangane nawe…
I-Medical Instrument Device Mold Factory Yenziwe E-China
I-Multi-cavity nokushintshana kuyizimo zokunquma ezibalulekile zokukhiqiza isikhunta sedivayisi yezokwelapha. Inqubo yesikhunta ye-JS MOLD isivumela ukuthi sikhiqize isikhunta esikwazi ukubamba i-CPK edingekayo embonini yezokwelapha. njalo yakha amaphakheji esikhunta amaningi okuhlanganisa okuphelele kwemishini yezokwelapha…
China Tooling For Daily Commodity Izingxenye
I-JS MOLD Mold iyithuluzi kanye nomenzi wesikhunta etholakala e-GuangDong China. Sigxila ekusetshenzisweni okunembayo kwesikhunta Samadivayisi Ezokwelapha, izingxenye zezimoto, izinto ezisebenza endlini kanye neminye imikhakha. abanolwazi olucebile ekwenzeni imikhiqizo yomjovo ukukhiqizwa ngobuningi. I-ODM noma i-OEM zombili ziyatholakala. I-ODM: sine…
Igama Lenkampani:Thinkbus Kalung(Dongguan) Manufacturer co.,Ltd (JS MOLD Mold) Uhlobo lwebhizinisi:Umkhiqizi Oyinhloko: CNC Milling, Plastic Mold/Tooling, Prototype,Umkhiqizo Wokubumba Umjovo, Isikhunta esinegwebu lomjovo, Ukuphrinta kwe-3D,I-Die Casting, Igesi Ukubunjwa komjovo okusizwayo njengengxenye ye-Auto, Medcial,…
12Ikhasi 1/2Ikhasi 1/2 XHUMANA NATHI
UMBUZO NGE-PRICELISTUMBUZO NGE-PRICELIST